Jaamacadda SIU oo qabatay munaasabad lagu taageerayay wax qabadka guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe – Radio Muqdisho
Munaasabadaan lagu taageerayay waxqabadka Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe oo ka mid ah bahda Jaamacadda SIU, ayna soo qaban qaabiyeen ardayda Jaamacadda, gaar ahaan kuliyadda siyaasadda iyo culuumta bulshada ayaa waxaa ka qeyb galay Xildhibaanno, aqoonyahanno, ururadda bulshada rayidka, mas’uuliyiinta iyo maamulka sare ee Jaamacadda SIU, odoyaal dhaqameed, ardayda Jaamacadda iyo marti sharafa kale ayaa lagu qabtay Muqdisho.
Munaasabadda ayaa waxaa mas’uuliyiintii ka hadashay waxa ay ammaan iyo bogaadin u jeediyay Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe mudada kooban waxqabadka uu la yimid, iyagoo maamulka sare ee Jaamacadda ku tilmaamay in ay yihiin dad aqoon u leh inay soo saaraan hogaamiyeyaasha mustaqbalka dhaw.
Hormuudka Jaamacadda SIU Prof Yaxye Cali Ibraahim ayaa xusay in munaasabadaan ay u qabteen markii ay arkeen waxqabadka muuqdo ee uu soo bandhigay Guddoomiye Guudlaawe oo ka mid ah bahda Jaamacadda SIU.
Sheekh Cali Maxamuud Xasan “Sheekh Cali Wajiis” oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa Ardayda Jaamacadda uga mahadceliyay sida ay u garteen in ay soo bandhigaan waxqabadka Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe.
Xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud “Cumar Finish, Xildhibaan Prof Cabdiraxmaan X.Aadan Ibbi iyo Xildhibaan C/samad Macalin Maxamuud ayaa si wada jir ah u shaaciyay in waxqabadka Guddoomiyaha ay tahay mid ka timid waxa uu ka bartay Jaamacadda SIU.
Ugu dambeyntii munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay muuqaal ka turjumaya Waxqabadka Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe.
Dowladda Federaalka waxey soo dhoweyneysaa Zakariya diidmada uu iska diiday fikirka colaadaha ee Al-Shabaab iyo sida uu nabadda u qaatay